Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay ku biirtay IATA CO2NNECT
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay ku biirtay IATA CO2NNECT
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Wararka Qadar • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay ku biirtay IATA CO2NNECT.
Mashruuca tijaabada ah ayaa lagu bilaabay afar (4) waddo, iyada oo la qorsheynayo in la gaarsiiyo inta ka hartay shabkada xamuulka qaada ee ka badan lixdan (60) meelaha xamuulka qaada iyo in ka badan boqol iyo afartan (140) goob rakaab ah oo adduunka oo dhan ah.
Barnaamijku waxa uu dhidibada u taagay horumar caalami ah oo ku wajahan kaarboonaynta xamuulka hawada.
Qatar Airways Cargo waxay doonaysaa inay horseed u noqoto buuxinta rajada macaamiisha ee heerarka ugu sarreeya ee sii jirista deegaanka.
Duuliyuhu wuxuu isticmaalaa warshadaha IATA habka ugu fiican ee xisaabinta CO2 qiiqa xamuulka.
Iyadoo lala kaashanayo Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA), Qatar Airways Cargo, qaybta xamuulka ee Kooxda Qatar Airways, waxay noqon doontaa xamuulka ugu horreeya ee ku soo biira IATA CO2NNECT madal waxayna siisaa xal deegaan oo habaysan macaamiisheeda. Kuehne+Nagel, mid ka mid ah hormoodka xamuulka xamuulka ee aduunka, ayaa noqon doona macmiilka bilawga ah ee madal, iyadoo la raacayo go'aankooda joogtaynta. Si loo calaamadeeyo iskaashigan, 01kii Noofambar 2021 Qatar Airways Cargo waxay ka shaqeysay shixnadihii ugu horreeyay ee kaarboon-dhexdhexaad ah oo xamuul ah oo ka yimid Doha ilaa Frankfurt, Zaragoza, Liège iyo Paris.
Cutubkan cusub ee barnaamijka iskaa wax u qabso ee kaarboonka, oo lagu dhisay dallada IATA, ayaa dejisa horumar warshadeed si loo dardargeliyo decarbonization ee duulista waxayna awood u siinaysaa shixnadaha xamuulka hawada si ay u noqdaan dhexdhexaad kaarboon iyadoo la siinayo xisaabinta kaarboon isku dhafan iyo xal u dhexeeya Qatar Airways, Rabadaha, iyo kuwa xamuulka qaada sida Kuehne+Nagel. Waxay macaamiisheeda siin doontaa dammaanad in dhibcaha la iibsaday si loo dhimo qiiqyadan ay ka yimaaddaan mashaariicda si madax-bannaan u keenaya dhimista kaarboonka, iyo sidoo kale faa'iidooyinka deegaan iyo bulsho oo ballaadhan.
Mashruuca tijaabada ah ayaa lagu bilaabay afar (4) waddo, iyada oo la qorsheynayo in la gaarsiiyo inta ka hartay shabkada xamuulka qaada ee ka badan lixdan (60) meelaha xamuulka qaada iyo in ka badan boqol iyo afartan (140) goob rakaab ah oo adduunka oo dhan ah. Duuliyaha ayaa isticmaala a IATA warshadaha ugu fiican ee xisaabinta CO2 qiiqa halkii xamuul. Barnaamijkan, macaamiisha xamuulku waxay si fudud u dhimi karaan qiiqa qiiqa ee la xidhiidha shixnadaha xamuulka hawada, taasoo ah tillaabo lagu gaarayo ballanqaadkooda sii jirista deegaanka. Kaliya la xaqiijiyay, tayo sare leh iyo ICAO CORSIA (Kaarboonka Deminta iyo Dhimista Qorshaha Duulimaadyada Caalamiga ah) ee kabitaanka xaqa u leh ayaa la isticmaali doonaa.
Kooxda Qatar Airways Madaxa fulinta, Mudane Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Iyadoo Qatar Airways ay markii ugu horreysay billowday barnaamijkeeda kaarboonka ee rakaabka 2020, waxaan ku faraxsanahay inaan hadda siino ikhtiyaarka ah in xamuulka hawada lagu qaado CO.2 hab dhexdhexaad ah mustaqbalka. Qatar Airways Cargo ayaa had iyo jeer safka hore kaga jirtay hindisayaasha warshadaha. Waxaan ku hanweynahay dadaalkayaga ku aaddan taageeridda warshadaha duulista si aan u gaarno yoolalka dhimista qiiqa kaarboonka ee hamiga leh."
Willie Walsh, IATAAgaasimaha Guud, ayaa yidhi, "Bartilmaameedka warshadaha ee lagu gaaro qiiqa kaarboonka saafiga ah eber 2050 wuxuu khuseeyaa rakaabka iyo xamuulka labadaba. Waxa kale oo ay u baahan tahay dhammaan daneeyayaasha warshadaha si ay u wada shaqeeyaan oo ay u qaataan xalal cusub. Hambalyo Qatar Airways Cargo oo ah shirkaddii ugu horreysay ee hirgelisa CO2NNECT, iyo Kuehne+Nagel oo ah macmiil bilawday. Sida dunidu isugu timaaddo kulanka COP26 si loo xoojiyo qorshayaasha dhimista kaarboon-ka caalamiga ah, daah-furka xalkan wax-ka-beddelku wuxuu muujinayaa ballanqaadkeenna ballaaran ee warshadaha ee ku aaddan xamuulka hawada waara."
felix lian wuxuu leeyahay,
Nofeembar 15, 2021 at 08: 26
Waxaan bixinaa adeegga gudbinta xamuulka ee Shiinaha ilaa Mexico/Colombia/Chile.